अस्ट्रेलियामा रिमेक गरियो 'चुलेसिमा' गीतको म्युजिक भिडियो - AusMandu
The main intention of Ausmandu is to provide information, entertainment and inspiration. It is run by young minds and may have some lackings, your valuable suggestions are highly appreciated. Throw us an Email: [email protected]ausmandu.com
By Ausmandu On Aug 21, 2018
नेपाली लोकप्रिय सदावहार ‘चुलेसीमा’ गीतको अस्ट्रेलियामा रिमेक गरिएको छ । अस्ट्रेलियामा रहेर पनि नेपाली गीत संगीतको प्रबर्द्धनको लागि लागिरहेका सुनोद श्रेष्ठले ‘चुलेसी’ मा गीतको रिमेक म्युजिक भिडियो ल्याएका हुन् ।
‘चुलेसी’ बोलको गीतमा प्रकट पंगेनीको शब्द, सुनिल बर्देवाको कम्पोज र संजीव सिंहको स्वर रहेको छ । लोकप्रिय गायक तथा कम्पोजर सुनिल बर्देवाको सम्झनामा रिमेक गरिएको म्युजिक भिडियो अस्ट्रेलियाको मेलबर्न शहरमा छायांकन गरिएको हो ।
सुनोद श्रेष्ठले निर्देशन गरेको उक्त म्युजिक भिडियोमा सुनोद श्रेष्ठ स्वयं र एन्जी मुल्मी श्रेष्ठले अभिनय गरेका छन् । भीम गोपाल इन्टरनेन्टमेन्टले निर्माण गरेको म्युजिक भिडियोलाई जीवन रसाइलीले सम्पादन गरेका हुन् ।